Muwaadin iswiidhish ah oo Itoobiya lagu xukumey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Fikru Maru, dhakhtar iswiidhish-itoobiyaan oo lagu oogay dacwad laaluush ah. sawir: Henrik Montgomery/TT
Muwaadin iswiidhish ah oo Itoobiya lagu xukumey
Emy Maru: Isniinta ayaa nalala ballamey
La cusbooneeyay fredag 21 oktober 2016 kl 13.37
La daabacay fredag 21 oktober 2016 kl 12.20
Dhakhtarka itoobiyaanka-iswiidhishka ee lagu magacaabo Fikru Maru ayuu ku dhacay xukun dacwadeed la xiriira laaluush, sida ku cad war-bixin lagu soo daabacay idaacadda la iska daawado ee SVT laanteeda Gävleborg.
– Waa arrin laga xumaado in lagu xukumo hadal suuqa un ku jira, sida ay sheegtay gabadhiisa oo lagu magacaabo Emy Maru oo u warrameeysay laanta wararka Ekot.
Kadib markii dhowr toddobaad uu dib u dhac ku yimid wada-hadalkii dacwadda maxkamadda ayaa maanta lagu dhawaaqay inuu dhakhtarka wadnaha iswiidhishka-itoobiyaanka Fikru Maru oo ku sugan cusbital lagu xannaaneeyo lagu oogey dacwad ka dhan ah oo la xiriirta laaluush.
Illaa iyo hadda ma cadda xukunka dhakhtarka lagu ridi doono. Iyadoona ey iminka maxaakiimtii dib ugu sii jeedaan maxkamadda iyo sidii ey uga doodi lahaayeen xukunka lagu ridi doono iyo halka uu ku dambeeyn doono.
Gar-yaqaanka Fikru Maru ee lagu magacaabo, Hans Bagner, ayaan illaa hadda wax akhbaar ah middaa kala socon.
– Qodobka dacwadda lagu soo oogey ayuu xukunkiisu u dhexeeyaa 7-15 sannadood. Isaga qudhiisa maahan cidda lagu heeysto inuu dembiga galay ee waxaa lagu oogay dacwad ah inuu wax ka ogaa, sida uu sheegtay gabadha eedeeysanaha Emy Maru.
Go’aanka maxkamadda ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo maalmaha foodda innagu soo haya.
Isha/ Ekot, Svt-nyheter Gävleborg.
Maxkamaddii Fikru Maru oo dib loo dhigey